Wararka - Halbeegyada laga Soosaaray Dhirta Shiinaha
Inta badan dawooyinka dhaqameed ee Shiinaha laga soo saaro ayaa badanaa la dhoofiyaa. Tani waxay la xiriiri kartaa xaqiiqda ah in weli ay jiraan kala duwanaansho fara badan oo ku saabsan aragtida dawooyinka Shiinaha ee laga soo saaray dawooyinka Shiinaha. Dad badan ayaa u maleynaya in soosaarida dawada Shiinaha ay aad uga duwan tahay qaybaha qurxinta daawada Shiinaha. Waa daawo dhaqameed Shiineys ah, maxaa yeelay waxaa jira fal-gallo kiimikaad oo badan oo qarsoon oo ku saabsan habka loo qurxiyo daawada dhaqameed ee Shiinaha. Tani waa saameyn aan la gaari karin marka la soo saaro dawada dhaqameed ee Shiinaha. Xaqiiqdii, cilmi baarista shirkadda Guangdong Yifang ee ku saabsan granules dawooyinka dhaqameed ee Shiinaha ayaa caddeysay in soosaarida daawada Shiinaha ay sii wadi karto inta badan astaamaha dawada Shiinaha. Isla mar ahaantaana, horumarka tikniyoolajiyadda, maaddooyinka wax ku oolka ah ee daawada Shiinaha ayaa noqday mid cad. Heerka dawada Shiinaha ee ku jirta Farmashiyaha Shiinaha waa Tixraac, waa inaan awood u yeelanaa inaan qaabeyno sida ugu dhaqsiyaha badan heerarka hordhaca ah ee soosaarida dawada Shiinaha ee buuxiya astaamaha daawada Shiinaha oo ay dunidu aqbasho, isla markaana sii waddo hagaajinta habka fulinta. Tani waxay sidoo kale waafaqsan tahay sharciga hadda jira ee horumarinta botanicals.
Jaangoynta iyo hagaajinta soo saarista dawooyinka dhaqameed ee Shiinaha ayaa dib uga dhacay gadaal ahaan. Markii la hirgaliyo iyo horumarka joogtada ah ee qorshaha hagaajinta heerka dawooyinka ee wadankeyga, nidaamka heerka dawooyinka qaranka ayaa markii hore la aasaasay, xawaaraha dhismaha macluumaadka qawaaniinta dawooyinka ayaa la dedejiyay, iyo shaqada maaraynta heerarka dawooyinka ayaa noqotay mid la jaangooyay oo la hagaajiyay. Si kastaba ha noqotee, jaangooyooyinka soo-saarka dawooyinka dhaqameed ee Shiinaha ayaa weli dib u dhacaya, badanaa dhinacyada soo socda:
① Heerku ma taagna. Soosaarida dawooyinka Shiinaha ayaa ah alaabta ceyriinka ee muhiimka u ah soo saarista dawooyinka shatiga ee Shiinaha. Sida laga soo xigtay tirakoob, qiyaastii 29.8% ee dawooyinka patent-ka Shiinaha waxay isticmaalaan dawooyinka Shiinaha laga soo saaro, laakiin wali waxaa jira qaar laga soo saaray dawooyinka Shiinaha oo aan weli dejin heerarka qaranka. La'aanta heerarka sharciga, heerarka dalabka-dhinacyada iyo heerarka shirkadaha ayaa inta badan lagu qaataa wax soo saarka iyo nashaadaadka ganacsiga, iyo qodobbada tayada ee qandaraaska waxaa loo isticmaalaa inay yihiin aasaaska gaarsiinta alaabada, hababka baaritaanka tayada badeecaduna waa kuwo jahawareersan.
② Heerku ma fiicna. Waxyaabaha caadiga ah ee caadiga ah ayaa aasaas u ah xakamaynta wax ku oolka ah ee tayada dawooyinka Shiinaha laga soo saaro. Si kastaba ha noqotee, sababtoo ah faafinta muddada dheer ee heerarka qaar ka mid ah soosaarida dawooyinka Shiinaha, walxaha caadiga ah ma fiicna. Tusaale ahaan, qaar ka mid ah heerarka soo-saarka dawada Shiinaha ee duugga ah ayaa ka maqan xaddiga haraaga sunta cayayaanka iyo walxaha go'aaminta biraha culus, qaar baa ka hooseeya heerarka baaritaanka ee qalabka kaabayaasha, qaarna ma lahan baaritaannada xaddidan microbial.
③ Khaladaad la'aanta heerarka. Waxaa jira jaangooyooyin badan oo loogu talagalay soosaarida dawada Shiinaha, waxaana jira khaladaadyo ka jira magac bixinta, hababka diyaarinta, guryaha, iyo kormeerka. Tusaale ahaan, qaar ka mid ah soosaarayaasha daawada dhaqameed ee Shiinaha ayaa leh magac isku mid ah laakiin habab kala duwan oo diyaarin ah Qaadashada nuxurka Scutellaria baicalensis Georgi tusaale ahaan, waxay u muuqataa 12 jeer daabacaadda 2010 ee Farmashiyaha Shiinaha iyo "Qormooyinka Dawooyinka Dhaqanka Shiinaha". , "Qiimaha pH-ka ugu dambeeya intaan la qalajin", "Xalka lagu dhaqo alaabta ceyriinka ah" iyo xuduudaha habka kale ee muhiimka ah ee saameeya tayada alaabooyinka la dhammeeyay aad ayey u kala duwan yihiin, taas oo si fudud u sababi karta jahwareerka soo-saarka iyo isticmaalka.
Level Heerka caadiga ahi ma sinna. Heerka caadiga ah ee soosaarida dawada dhaqameed ee Shiinaha oo lagu ansixiyay qaab daawo cusub oo lagu daro Farmashiyaha Shiinaha waa mid aad u sarreeya. Si kastaba ha noqotee, waxyaabihii kale ee laga soo qaatay dawooyinka dhaqameed ee Shiinaha ayaa wali leh dhibaatooyin sida tikniyoolajiyad aan ku filnayn iyo la'aanta tiknoolajiyad asaasi ah. Intaa waxaa dheer, inta badan soosaarayaasha soosaarida dawada Shiinaha waa shirkado yar yar oo heer farsamo oo liidata iyo awood wax soo saar. Marar dhif ah ayey wax ka beddelaan oo ay baaraan habka wax soo saarka ee badeecada si dhab ah, iyo la'aanta horumarinta wax soo saarka qoto dheer, taas oo keenta in wax soo saar teknoolojiyadeed oo aad u hooseeya laga soo saaro dawooyinka Shiinaha. Tartan suuq hooseeya oo nidaam la’aan ah.
⑤ Heerka lama tirtiro. Sababtoo ah la'aanta qaab lagu qiimeeyo hirgelinta heerarka soo saarista dawada Shiinaha, heerarka laga soo saaro dawooyinka Shiinaha qaarkood "way nool yihiin laakiin ma dhintaan", sidaa darteed heerarka qaarkood oo aan la cusbooneysiinin ama dib loo eegin sanado badan ayaa wali la isticmaalayaa, waxaana jira baahi degdeg ah oo loo qabo in la dejiyo qaab ciribtirka caadiga ah